‘जामन: गुभाजुको आधिकारिक इतिहास’ - मनोरञ्जन - नेपाल
केही समयअघिसम्म रवि सायमी क्यामेरा बोकेर छायांकनमा निस्कन्थे । अबचाहिँ उनको परिचय फिल्म निर्देशकमा बदलियो । झन्डै दुई दशक फिल्मी क्षेत्रमा गुजारेका उनले १७ औँ शताब्दीका प्रसिद्ध तान्त्रिक जामन: गुभाजुको जीवनीलाई फिल्ममा उतारेका छन् । निर्देशक सायमीसँगको वार्ता :
जामन: गुभाजुको जीवनीमा फिल्म बनाउने खाँचो किन परेको हो ?
उनले जप, ध्यान, समाधि, योग आदि गर्थे । एकदम हँसिलो र सबैसँग जिस्किरहनु पर्ने । पानीको हाहाकार हुँदा प्रताप मल्ललाई भीक्षा दिएर पानी पारिदिएको । उनको व्यक्तित्व र ज्ञान मलाई ‘आइडल’ लाग्यो । यो व्यक्तित्व पहिलेपहिले कमिक्समा आउँथ्यो । पछि त्यो पनि हराउँदै गयो । मेरो छोराले नै नचिन्ने भयो । त्यसपछि मलाई यस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वको जीवनी सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने चेतना भयो । उनको योगदानलाई मर्न नदिन चलचित्र बनाएरै छाड्ने टुंगोमा पुगेँ ।
यो फिल्म जामन: गुभाजुको आधिकारिक इतिहास हो ?
स्वयम्भूको शान्तिपुरमा नवनागको रगतले लेखिएको किताब छ । त्यो किताब ल्याएर आकाशतिर देखायो भने पानी पर्छ भन्ने जनविश्वास छ । प्रताप मल्लका समकालीन हुन्, जामन: गुभाजु । प्रताप मल्ल नेपालका राजा थिए भन्ने साँचो हो भने जामन: गुभाजु थिए भन्ने पनि सत्य हो । यो फिल्म बनाउँदा नरेशमान वज्राचार्य, यज्ञमानपति वज्राचार्य, फणीन्द्ररत्न वज्राचार्य, बाबुराजा वज्राचार्य र शान्तरत्न वज्राचार्यजस्ता खोजकर्ता/अध्येता स्रोतव्यक्तिका रुपमा उभिइदिए । त्यसैले यो फिल्म जामन: गुभाजुको आधिकारिक इतिहास हो ।
फिल्ममा खेल्ने ऐतिहासिक पात्र–संयोजन कसरी गर्नुभयो ?
प्रताप मल्लको भूमिका गर्ने पात्र छान्दा निकै गाह्रो भयो । प्रताप मल्लको जस्तो दाह्री–जुँगा भएको मानिस ज्यान गए भेटिएन । बल्लतल्ल पुष्करभक्त माथेमालाई छानियो । उनी यूएनडीपीमा जागिरे । हामीले खोजेजस्तो दाह्री पाल्न, मिलाउन नपाइने रहेछ । पछि मुस्किलले उनको दाह्री मिलाइयो ।
तान्त्रिक विद्याको हालतचाहिँ कस्तो रहेछ ?
विज्ञानको युग आयो । आधुनिक उपचार पद्धति विकास भए । तैपनि, मानिस झारफुकमै विश्वास गर्छन् ।
यस विद्याबारे तपाईंको बुझाइ कस्तो बन्यो ?
कालीमाटीमा तन्त्रमन्त्र गर्ने द्यो:मा (देउती आमा) छन् । बिरामी पर्दा औषधीले निको भएन भने त्यहाँ जान्छु । निको हुन्छ । सबै रोगको उपचार पहिले यही विधिबाट हुन्थ्यो । निपुण विद्या हो भन्छु म ।
तान्त्रिक विद्यालाई विश्वास गर्नेहरु घटेका छैनन् त्यसो भए ?
म यसको आधिकारिक अध्येता होइन । कुन तहमा घट्यो भन्ने बताउन सक्दिनँ तर झारफुक गर्ने मानिस टन्नै देख्छु ।
धेरैले हेर्ने/बुझ्ने नेपाली भाषामा फिल्म नबनाई किन नेपाल भाषामा बनाउनुभएको ?
उनी नेवार समुदायका लिजेन्ड हुन् । त्यसैले पहिले यो समुदायलाई देखाउनु उचित लाग्यो । नेपाली भाषामा डबिङ गरिसकेका छौँ । अब चाँडै देखाउँछौँ ।
अब मूलधारको फिल्म निर्देशनमा फड्को मार्ने हो ?
मेरो जीवन नै फिल्म निर्माण हो । तैपनि व्यावसायिक फिल्म निर्देशन गर्नेबारे अहिले नै सोचेको छैन ।
छायांकनको अनुभवले निर्देशनमा केही फरक पार्दो रहेछ ?
छायाकारको गुण निर्देशकमा र निर्देशकको गुण छायाकारमा हुनुपर्छ । छायांकनको अनुभवका कारण आफूले चाहेको एंगल लिन त्यस्तो गाह्रो भएन ।